म्याकमा कसरी इलेक्ट्रोनिक DNI वा DNIe प्रयोग गर्ने म म्याकबाट हुँ
म्याकमा इलेक्ट्रोनिक DNI वा DNIe कसरी प्रयोग गर्ने
पाब्लो अपारीसियो | | म्याक कम्प्युटरहरू, ट्यूटोरियलहरू
अब तीन बर्ष अघि मैले मेरो परिचय पत्र नवीकरण गरेको छु। मसँग पुरानो संस्करण थियो जुन मलाई लाग्छ मलाई नीलो पृष्ठभूमि भएको ठूलो कागजात थियो र सबैभन्दा सानो जुन मलाई केही अपराधी देखिन्थ्यो - जब मैले नयाँ डीएनआईको चिप देखेको थिएँ मैले सोचेँ: «र यो केको लागि हो? ? »। ठिक छ, यो DNIe को चिप हो, र तपाइँ सबैलाई थाहा छ, उदाहरणका लागि, "e-mail" मा "e" द्वारा, "e" लाई सामान्यतया "इलेक्ट्रोनिक" हुन्छ। तर यो केको लागि हो? तपाईं कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ DNIe म्याकमा?
DNIe एक कागजात हो कि केहि बाहिर ले कार्य गर्दछ इन्टर्नेट प्रक्रियाहरूउदाहरण को लागी। यो अनलाइन बैंकिंग लेनदेन गर्ने जस्ता चीज हो तर, तार्किक रूपमा, अधिक सुरक्षा उपायहरू सहित। कम्प्युटि ofको विश्वमा जसमा सबैजनाले विन्डोज प्रयोग गर्दछन्, म्याकमा काम गर्न यसलाई प्राप्त गर्नु त्यति सजिलो नहुन सक्छ र त्यसैले हामीले यो सानो गाईड लेख्ने निर्णय गर्यौं। अर्को हामी तपाईलाई म्याकमा DNIe प्रयोग गर्न को लागी जान्नु पर्ने सबै कुरा बताउँदछौं र प्रयास गर्दै मर्दैन।
ट्यूटोरियल सुरू गर्नु अघि, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि तपाईंलाई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण गर्नको लागि इलेक्ट्रोनिक आईडी रिडरको आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईंसँग अहिलेसम्म कुनै छैन भने, तल तपाईंसँग उत्तम गुणवत्ता-मूल्य मोडेलहरूको छनोट छ ताकि तपाईं आफ्नो म्याकमा तपाईंको इलेक्ट्रोनिक आईडी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग पहिले नै यो छ भने हामी प्रक्रिया चरण चरणमा सुरू गर्नेछौं।
ट्रस्ट DNI रिडर, ...
Sveon SCT011M - पाठक ...
Woxter आईडी पाठक ...
1 DNIe को लागी प्रमाणपत्र कहाँ डाउनलोड गर्ने
2 म्याकमा इलेक्ट्रोनिक DNI कसरी प्रयोग गर्ने
3 म्याकका लागि इलेक्ट्रोनिक DNI पाठक
DNIe को लागी प्रमाणपत्र कहाँ डाउनलोड गर्ने
कुनै नयाँ प्रकारको स्थापना गर्नु अघि (अपडेट बिना नै पक्कै पनि) यो निश्चित गर्नु उचित छ कि हामीसँग कुनै पनि छैन सम्भावित अघिल्लो स्थापनाको बाँकी। यदि हामी निश्चित छौं कि हामीले यो कहिले प्रयोग गरेको छैनौं, हामी सिधा नयाँ ड्राइभरहरूको स्थापनामा जान सक्दछौं। यदि होईन भने हामी निम्न कार्यहरू गरेर कुनै पनि ट्रेसहरू हटाउनेछौं।
हामी टर्मिनल खोल्छौं। यो फोल्डरमा छ अनुप्रयोगहरू / उपयोगिताहरू, डकमा Launchpad बाट वा स्पटलाइटबाट यसको लागि खोजी गर्दै।
हामी लेख्छौँ dsenableroot सुपर युजर सक्रिय गर्न।
यसले हामीलाई हाम्रो प्रयोगकर्ताको पासवर्डको लागि सोध्छ। हामी यसलाई परिचय दिन्छौं।
यसले रूट पासवर्डको लागि हामीलाई सोध्नेछ। हामी हामीले चाहेको परिचय दिन्छौं, तर यो त्यस्तो हुनु राम्रो हो जुन हामीले याद गर्न सक्दछौं यदि हामी कहिले यस्ता चीजहरू फेरि गर्न चाहन्छौं भने।
हामी लाइब्रेरीमा जान्छौं र Libpkcs11-dnie फोल्डर हटाउँछौं
हामी टर्मिनल खोल्छौं र निम्न प्रविष्ट गर्दछौं:
sudo rm / var / db / प्राप्ति / * dni *
अब हामी dsenableroot commandd कमाण्डको साथ मूल खातालाई निष्क्रिय गर्छौं
अब हामीसँग सबै कुरा खाली छ हामीसँग जानु पर्छ यो पृष्ठ, फाईलहरू डाउनलोड गर्नुहोस् र स्थापना गर्नुहोस्।
म्याकमा इलेक्ट्रोनिक DNI कसरी प्रयोग गर्ने
फाइल पहिल्यै स्थापित संग, एक स्थापना .pkg फाईलमा डबल क्लिक र निर्देशनहरू अनुसरण गर्दै छन् (हाम्रो प्रयोगकर्ता पासवर्ड राख्नु सहित) को रूपमा सरल, हामी अगाडि बढ्छौं। कन्फिगर गर्नुहोस् र म्याकमा DNIe प्रयोग गर्नुहोस्। हामी यी चरणहरू अनुसरण गरेर गर्छौं:
हामीले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा यो हो, यदि हामीसँग यो स्थापना गरिएको छैन भने, जानुहोस् मोजिला पृष्ठफायरफक्स वेब ब्राउजर डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्। ऐतिहासिक रूपमा, सफारी धेरै वेब पृष्ठहरूको साथ प्राप्त भएको छैन र यो यस्तो प्रकारको प्रमाणपत्रहरूमा पनि हुन्छ जुन ओएस एक्सको पूर्वनिर्धारित ब्राउजरसँग काम गर्दैन। कुनै पनि केसमा, यो सँधै दोस्रो वेब ब्राउजर भएको लायक हुन्छ। के हुन सक्छ, र मेरो लागि फायरफक्स म्याकको लागि दोस्रो उत्तम विकल्प हो।
अर्को चरण भनेको फायरफक्समा प्रमाणपत्र स्थापना गर्नु हो। यो गर्नका लागि, हामी फायरफक्स खोल्छौं, हामी गर्दछौं प्राथमिकता / उन्नत / प्रमाणपत्र र हामी क्लिक गर्दछौं सुरक्षा उपकरणहरू.
हामी मोड्युललाई एउटा नाम दिन्छौं (उदाहरणका लागि, DNIe PKCS 11 मोड्युल)।
हामी म्यानुअल तरीकाले मोड्युलको मार्ग सूचित गर्दछौं जुन निम्न हुनेछ: लाइब्रेरी / Libpkcs11-dnie / lib / libpkcs11-dnie.so
हामी क्लिक क्लिक स्वीकारौं।
मूल प्रमाणपत्र स्थापना गर्न हामी जाँदै छौं प्राथमिकता / उन्नत /प्रमाणपत्र/ प्रमाणपत्र / प्राधिकरण हेर्नुहोस्.
हामी आयात चयन गर्दछौं।
हामी सर्टिफिकेट को पथमा नेभिगेट गर्छौं जुन भित्र छ / पुस्तकालय / Libpkcs11-dnie। मेरो केसमा, यो सिधै त्यो फोल्डरमा थियो। यदि त्यहाँ छैन भने हामी त्यसलाई सेयर फोल्डरमा उही मार्गमा खोज्छौं।
हामी तीन बक्स चिह्नित गर्दछौं।
अन्तमा, हामी ठीक क्लिक गर्छौं।
यो वैकल्पिक हो, तर सिफारिश गरिएको छ, तपाईको कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् कुनै पनि अप्रत्याशित समस्यामा नलिनको लागि। एक पटक रिबुट गरेपछि, सबै समस्या बिना नै काम गर्नुपर्दछ। म्याक सुरु नभएसम्म DNIe रिडर जडान नगर्नु यो पनि चाखलाग्दो हुनेछ।
Para जाँच गर्नुहोस् कि सबै काम गर्दछ राम्रोसँग, तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यो पृष्ठ उही राष्ट्रीय पुलिस द्वारा प्रदान गरीएको । यदि पृष्ठ लोड भएन भने, केही हामीले गरेका थियौं वा केही गलत भयो। यो हुन सक्छ कि त्यहाँ कुनै कार्ड सम्मिलित गरिएको छैन, उदाहरणका लागि। यी केसहरूमा सब भन्दा राम्रो कुरा भनेको हटाउन र इलेक्ट्रॉनिक DNI रिडरको USB फेरि राख्नु हो, जाँच गर्नुहोस् कि त्यहाँ एक कार्ड छ र फेरि सुरु गर्नुहोस्। यदि हामीले गल्ती फेला पारेनौं भने यो शुरूबाटै सुरु गर्नु राम्रो विचार हुन सक्छ, तर यस पटक सबै चरणहरू आवश्यक हुनेछन्, ड्राइभरहरूको सर्टिफिकेट र प्रमाणपत्र हटाउने सहित।
याद गर्नुहोस् कि प्रमाणपत्र 30० दिनको लागि मात्र मान्य हुनेछ। त्यस समय पछि फेरि प्रमाणपत्र डाउनलोड र स्थापना गर्न आवश्यक हुनेछ।
म्याकका लागि इलेक्ट्रोनिक DNI पाठक
माथि वर्णन गरिएको सबै कुराले हामीलाई सहयोग गर्दैन यदि हामीसँग छैन भने इलेक्ट्रोनिक आईडी पाठक। IMac मा एसडी कार्डहरू पढ्न सक्षम हुन हामी बाह्य पाठकलाई चाहिन्छ त्यहि तरीकाले, हामी पनि एक इलेक्ट्रोनिक आईडी रिडर किन्नु पर्छ।
कुन पाठक खरीद गर्न लायक छ? त्यसोभए त्यो मिलियन डलरको प्रश्न हो। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् र ती मध्ये धेरैले हामीलाई उत्तम सेवा गर्दछन्, तर हामी त्यस्तो चीज पनि फेला पार्न सक्दछौं जुन अनलाइन लायक छैन। म केहि किन्नको लागि जब म सामान्यतया गर्छु भित्र हेर्नुस अमेजन, जुन मेरो लागि सब भन्दा राम्रो अनलाइन स्टोर छ जुन अवस्थित छ। थप रूपमा, यद्यपि यो सत्य हो कि केही टिप्पणीहरू किन्न सकिन्छ वा जालसाजी गर्न सकिन्छ, अमेजनले यी टिप्पणीहरूलाई यसको वेबसाइटमा देखा पर्न रोक्न खोज्दछ, त्यसैले हामी पढेका प्रायः समीक्षाहरू सत्य हुनेछन्।
एक राम्रो विकल्प, जुन वास्तवमा नम्बर १ विक्रेता यस प्रकारको पाठकको अमेजनमा हो, हो Woxter इलेक्ट्रॉनिक DNI , तर वाह! यो विन्डोज र लिनक्सको लागि हो। को कूलबक्स CRCOOCRE065 योसँग अझ राम्रो रेटिंग छ र यो म्याकको लागि उपलब्ध छ। तर सावधान रहनुहोस्, जहिले पनि यो म्याकको लागि उपलब्ध छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्।
के के तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ म्याकमा इलेक्ट्रोनिक DNI कसरी प्रयोग गर्ने?
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » म्याकमा इलेक्ट्रोनिक DNI वा DNIe कसरी प्रयोग गर्ने
ट्यूटोरियल को लागि धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै उपयोगी र गर्न सजिलो
ट्यूटोरियल धेरै राम्रो गरी सकेको छ। तर ... के कसैले इलेक्ट्रोनिक DNI प्रयोग गर्दछ?, प्रशासनको अर्को विफलता।
AmstradUser लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं कसरी विदेशमा बस्नुहुन्न भन्न सक्नुहुन्छ 😉
Aemedia लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यबाद, मैले केहि समयको लागि यो स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ तर कुनै बाटो थिएन। मसँग यो सँधै विन्डोजमा हुने गर्थें र मैले यो गुमाएँ। पक्कै पनि यो मेरो लागि कम्तीमा पनि उपयोगी छ।
सर्जियो मार्टोस सान्चेज भन्यो
नमस्ते, मलाई टर्मिनलसँग समस्या छ, किनकि यसले मेरो मूल पासवर्डलाई चिन्न सकेन, मलाई लाग्छ मसँग पहिले नै एउटा हुनुपर्दछ र मलाई याद छैन ...। के यो थाहा पाउन सम्भव छ?
सर्जियो मार्टोस सान्चेजलाई जवाफ दिनुहोस्
जड वा टूर परीक्षण गर्नुहोस्
मलाई नमस्कार, स्थापनाकर्ताले मलाई भन्दछ कि एक समस्या भएको छ र यो अहिले स्थापित भएको छैन
नमस्कार, म प्रोग्राम स्थापना गर्न सक्षम छु, यसले मलाई त्रुटि दिन्छ र स्थापना समाप्त हुँदैन। केहि विचारहरू?
मैले म्याकोस सिएरामा अपग्रेड गरेको छु र .pkg फाईल स्थापना गर्न प्रयास गर्दा मलाई त्रुटि दिन्छ। मलाई लाग्छ हामीले सियरा प्याकेज अपडेट हुन पर्खनु पर्दछ?
त्यो मलाई पनि हुन्छ। सिएराको साथ, मेरो DNIe ले काम गर्न रोकेको छ
Rfacal लाई जवाफ दिनुहोस्
म्याकको साथ DNIe प्रयोग यातना हो। सोयाडेम्याकमा प्रकाशित ट्यूटोरियललाई धन्यवाद म यसलाई प्राप्त गरें: तर नयाँ ओएस सिएरासँगै मेरो आनन्द। मेरो कामको लागि डिजिटल हस्ताक्षर हुनु आवश्यक छ, यो FNMT प्रमाणपत्र वा DNIe होस् र दुबै चीजले मलाई असफल गर्दछ। म एक विन्डोज पीसी किन्न विचार गर्दैछु (र एक्सप्लोरर पनि प्रयोग गर्दै, जुन केवल एक मात्र चीज हो जुन स्पष्टतः FNMT र DNIe ले राम्रोसँग चिनेको छ)। २ years बर्ष पछि मात्र म्याक प्रयोग गर्दा मलाई नराम्रो पेय पदार्थ फेला पर्‍यो, र यो पक्कै मेरो सँगी माछा ट्याks्कको मजाक हुनेछ। के कोहीले DNIe अद्यावधिक म्याकमा काम गर्न सक्दछ कि व्यावहारिक अपेक्षाहरू गर्न सक्दछन्? (वा प्रमाणपत्र: यो उस्तै हो: म प्राय: यसलाई प्राथमिकता दिन्छु। जब यो कास्टिंग गर्दै थियो यो छिटो थियो)
र तपाइँको म्याकमा विन्डोज स्थापना गर्न र यसलाई बुट क्याम्प मार्फत प्रयोग गर्न वा VMWare प्रयोग गरेर भर्चुअल मेसिन सिर्जना गर्न सजिलो र सस्तो छैन? जे भए पनि, म तपाईंसँग सहमत छु, म्याकमा DNIe प्रयोग गर्ने यातना हो, तर गल्ती प्रशासनको बेकारमा छ। मैले यो धेरै पहिले प्राप्त गरिसकेको थिएँ, तर अब मैले यसलाई फेरि प्रयोग गर्नु आवश्यक छ र कुनै तरिका छैन। मलाई थाहा छैन यदि यो म्याकोसको बीटा प्रयोग गरिरहेको छु भने, जान्नुहोस्। मलाई विगतमा केहि समस्याहरू थिएनन् जुन तपाईं FNMT बाट डाउनलोड गर्नुहोस् र फायरफक्स मार्फत प्रयोग गर्नुहोस् जुन तिनीहरू पहिले नै सफारीको सट्टामा त्यो ब्राउजर प्रयोग गर्न बाध्य गर्दछन्, जुन अर्को हो।
म्यागलाई जवाफ दिनुहोस्
सिएरा संग सम्भव
Javierfc लाई जवाफ दिनुहोस्
यसले मलाई पुस्तकालय / Libpkcs11-dnie / lib / libpkcs11-dnie.so मोड्युल थप्न दिदैन
Celiamoar लाई जवाफ दिनुहोस्
म सिएरासँग गर्न सक्दिन र मलाई यो आवश्यक छ। के कसैले यसलाई स्थापित गर्न सकेको छ?
पेड्राजाजा एन्जललाई जवाफ दिनुहोस्
एस्टाबालिज Ivars मिरल्स भन्यो
पाठक स्थापना गर्न तपाईले मास्टर गर्न पर्छ, र यसलाई प्राप्त गर्न कुनै तरिका छैन
Estíbaliz Ivars Miralles लाई जवाफ दिनुहोस्
सिएराको साथ सम्भव ... कुनै बाटो छैन
समाधान गरियो! .Pkj प्याकेज स्थापना गर्नका लागि तपाईसँग म्याकमा फायरफक्स हुनु पर्छ, यदि यो स्थापना गरिएको छैन भने .pkj स्थापना गर्दा त्रुटि दिन्छ। एक पटक प्याकेज स्थापना भएपछि, तपाईले फायरफक्सलाई कन्फिगर गर्न अनुसरण गर्नका लागि यी चरणहरू देख्नुहुनेछ इलेक्ट्रॉनिक आईडीको साथ प्रयोग गर्न सक्षम हुन। यस्तो देखिन्छ कि यो केवल ब्राउजर हो जुन म्याकमा DNI सँग काम गर्दछ फायरफक्स
के तपाईं कृपया DNIe का साथ प्रयोग गर्नका लागि फायरफक्सलाई कन्फिगर गर्दा पालना गर्ने चरणहरू देखा पर्न सक्नुहुन्छ?
मैले फायरफक्स डाउनलोड गरेको छु र pkg फाईल स्थापना गर्दा यसले मलाई त्रुटि दिन्छ।
रामोन मार्टिनेज डे भेलास्को भन्यो
नमस्कार: सबै कुरा स्थापित र सही ढ working्गले काम गर्दैछ, तर तपाईं भन्नुहुन्छ: «याद गर्नुहोस् कि प्रमाणपत्र 30० दिनको लागि मात्र वैध हुनेछ। त्यस समय पछि फेरि प्रमाणपत्र डाउनलोड र स्थापना गर्न आवश्यक हुनेछ। फेरि डाउनलोड र स्थापना गर्नका लागि कहाँ चीज छ? के तपाई मलाई पृष्ठमा लिंक दिन सक्नुहुन्छ सिधा डाउनलोड लिंक होइन? अग्रिम धन्यवाद। अभिवादन
Ramón Martínez de Velasco लाई जवाफ दिनुहोस्
@ पाब्लो अपारीसियो: तपाईले मेरो टिप्पणीलाई जवाफ दिन सक्नुहुन्छ, कृपया? अग्रिम धन्यवाद। अभिवादन।
नमस्कार! के कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ? मैले सबै चरणहरू अनुसरण गरेको छु तर जब म तपाईंको सामाजिक सुरक्षा वेबसाइटमा प्रवेश गर्छु यसले मलाई भन्दछ कि त्यहाँ प्रमाणपत्रहरू स्थापना गरिएको छैन ...
योशियनलाई जवाफ दिनुहोस्
मोड्युल फाइल लोड गर्ने प्रयास गर्दा म त्रुटि पाउँछु?
सबै कामका लागि धेरै धेरै धन्यबाद
फबियोलालाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ अपरान्ह, अब हेर्नुहोस् कि तपाईंले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि, जब म libpkcs11-dnie.so फाईल स्थापना गर्दछु, यसले मलाई "अलर्ट, मोड्युल थप गर्न सकिदैन" भन्छ। के तपाईंलाई थाहा छ के गर्ने?
मसँग डेभिडको जस्तै उस्तै समस्या छ, मोड्युल लोड गर्ने क्रममा उही त्रुटि सन्देश: "चेतावनी, मोड्युल थप गर्न सकिदैन"
नमस्ते !! मलाई लाग्छ कि PKG ले त्रुटि दिन्छ किनकि फायरफक्स स्थापना गरिएको छैन, यसले मलाई उही त्रुटि दिए! काेशिस गर !!!
सिउललाई जवाफ दिनुहोस्
म अघिल्लो मोड्युल डाउनलोड गर्दछु र मलाई फेरि shit गर्न दिनुहोस्, म स्थापना सफा गर्छु र फेरि पूरै प्रक्रिया सुरू गर्दछु, तर म DNIe पढ्न सक्षम छैन।
सिएरा ओएसको साथ म्याकबुक प्रो
Zurupeto लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई थाहा छैन मैले कति चोटि इन्स्टल गरेको छु, हटाएको छु र पुन: स्थापना गर्‍यो, सबै चरणहरूको अनुसरण गरेर। ओएसएक्स उच्च सियरामा, म प्रायः यसलाई हृदयले जान्दछु !!!! ...। तर जब म ट्याक्स एजेन्सीमा पहुँच गर्न खोज्छु यसले मलाई त्रुटि दिन्छ 403०XNUMX यो व्याकुल छ ...। Dnie पहुँच गर्न सक्दैन ... तर उदाहरणका लागि जब फायरफक्सले मलाई प्रमाणपत्रहरू पहुँच गर्न सोधे, यो समस्याबिना प्रवेश गर्दछ ...। पल !!!! तपाईलाई केहि आइडिया छ के हुन सक्छ?
कसैलाई थाहा छ उनीहरू कहाँ स्थापित गर्छन् (स्पष्टतः म अगाडि रहेको)
मैले चरणहरू अनुसरण गरेको छु र यसले मेरो लागि काम गर्दैन, मैले मोड्युल लोड गर्दा त्रुटि दिएँ। समाधान नयाँ PKCS # 11 मोड्युलको साथ लगइन भयो। पछ्याउनका लागि चरणहरू: खुला मोजिला> प्राथमिकताहरू> गोपनीयता र सुरक्षा> सुरक्षा उपकरणहरू> नयाँ PKCS @ ११ मोड्युल चयन गर्नुहोस्> START सत्र क्लिक गर्नुहोस्> यसले आईडी कार्ड माग्नेछ> स्वीकार्नुहोस्। त्यसोभए तपाईंले mozilla> आदेश + Q लाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ र मोजिला फेरि खोल्नु पर्छ। त्यो क्षणमा यसले मोड्युललाई पहिल्यै पहिचान गर्दछ र तपाइँलाई DNIe का साथ काम गर्न दिन्छ।
यो मात्र मलाई हुन्छ: यसले मलाई भन्छ कि यसले DNIE-PKCS # 11 मोड्युल लोड गर्न सक्दैन, त्यसपछि म यसलाई डाउनलोड गर्दछु (म यसलाई फायरफक्स प्राथमिकताहरू भित्र मेटाउँछु) र यसलाई पुन: लोड गर्छु तर START बटन निस्क्रिय हुन्छ।
यदि मैले पाठकहरू चयन गरे ("Generic स्मार्ट कार्ड ..." DNIE-PKCS # 11 मोड्युल अन्तर्गत) निर्दिष्टताहरूमा यसले "कुनै उपस्थित छैन" भन्छ त्यसैले म यहाँ अड्किन्छु।
मेरो पाठकको क्लासिक यूएसबी जडान छ तर ओएस क्याटालिनासँग मेरो म्याकबुक प्रो सब भन्दा सानो यूएसबी सकेट छ (अंडाकार प्लग जुन म नाम याद गर्दिन) तर यसले पाठकलाई चिन्दछ (इभेन्ट १० 1052२) किनभने मेरो म्याक / युएसबीको बारेमा - यो ठिकै छ।
अर्को कुरा: प्रमाणपत्र जुन एक महिनामा समाप्त हुन्छ यो "ac_raiz_dnie.crt" हो? के तपाईं "libpkcs11-dnie-1.3.1_OSX-10.10_10.11.dmg" स्थापना गर्दा यो प्रमाणपत्र डाउनलोड हुन्छ? त्यसो भए, हरेक पटक जब तपाई DNI-E प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ केही समय पछि तपाईले प्राथमिकताहरू सफा गर्नुपर्नेछ र सबै कुरा पुन: स्थापना गर्नुपर्नेछ?
म सहयोगको कदर गर्छु। मलाई थाहा छैन फोरम अझै जीवित छ कि छैन। यदि कसैले मेरो श doubts्का स्पष्ट गर्न सक्छ भने म मेरो ईमेल छोड्दछु।
यसलाई फेला पार्न कुनै तरिका छैन:
हामी प्रमाणपत्रको पथमा नेभिगेट गर्छौं जुन / लाइब्रेरी / Libpkcs11-dnie मा हुनेछ। मेरो केसमा, यो सिधै त्यो फोल्डरमा थियो। यदि त्यहाँ छैन भने हामी त्यसलाई सेयर फोल्डरमा उही मार्गमा खोज्छौं।
मानुएल क्यान्टेली रोड्रिग्ज भन्यो
यो लाजको कुरा हो तर ... .. एउटा समाप्त हुन्छ, विन्डोजमा फर्किनु जुन हाम्रो समयमा आवश्यक पर्ने कुनै चीजको लागि DNI प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर। कसैलाई थाहा छैन कि त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरू छन् जो प्रोग्रामरहरू होइनन् र हामी प्रोग्राममा धेरै प्रयोग गर्दैछौं जसले हामीलाई केही फाँटहरू भर्न अनुरोध गर्दछ र त्यसले चाहेको प्रोग्राम स्थापना गरेर समाप्त गर्छ? इलेक्ट्रॉनिक आईडी काम गर्ने प्रयास गर्नु भन्दा सम्पूर्ण Adobe प्याकेज स्थापना गर्न INFINITELY सजिलो भएको छ।
अन्तमा मैले के गर्नु पर्छ मेरो छोरालाई मलाई उसको पीसी प्रयोग गर्न भन्नुहोस्।
म्यानुएल केन्टेली रोड्रिग्जलाई जवाफ दिनुहोस्
मारी क्रुज भन्यो
मलाई उस्तै कुरा हुन्छ: सतर्कता मोड्युल थप्न सम्भव छैन। मा पैसा प्रयोग गरेर .Mac असम्भव देखिन्छ।
मारी क्रूजलाई जवाफ दिनुहोस्
क्याटालिना स्थापना भएदेखि ... DNIe प्रयोग गर्न असम्भव छ।
म ओएस क्याटालिनामा अपग्रेड भयो र सबै कुरा पुनर्स्थापित गर्नुपर्‍यो।
ट्यूटोरियल को लागी धन्यवाद
येशू जी। भन्यो
यसका लागि धेरै ध्यान: FIREFOX को सम्बन्धमा, यस्तो देखिन्छ कि आज (मार्च २०२०) को रूपमा, केवल FIREFOX version 2020 संस्करण मान्य छ।
पछिल्लाहरू वैध छैनन्, किनकि उनीहरूले प्रमाणपत्रहरू सही रूपमा स्थापना गर्न आवश्यक सुरक्षा विकल्प समावेश गर्दैनन्।
यो FNMT पृष्ठमा संकेत गरिएको छ, म्याकको लागि प्रणाली आवश्यकताहरूमा।
जेसिस जीलाई जवाफ दिनुहोस्।
म यो स्थापना गर्न सक्दिन ......
मँ तीन बक्सको सट्टामा विश्वास सम्पादन गर्न दुई बक्सहरू पाउँछु।
कुनै मार्ग छैन ...।
धन्यबाद, तपाईंले मलाई बचाउनुभयो!
मोगलीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मैले प्रक्रिया शुरुबाट गरें, पाब्लोले भने जस्तै सबै फोल्डरका ट्रेसहरू मेटाए। सबै क्याटालिना र बिट4यू DNIe पाठकको साथ पूर्ण रूपमा काम गर्दछ। स्वयं हस्ताक्षर, ठीक छ। डिजिटल एडोब र DNIe का साथ PDFs हस्ताक्षर गर्नुहोस्, ठीक छ।
धेरै धन्यवाद !!
Churraco @ भन्यो
मोजिला फायरफक्स मार्ग दुबै यहाँ र स्पेनको गलत सरकारको पृष्ठमा अप्रचलित छ
Churraco @ लाई जवाफ दिनुहोस्
यो MacOS बिग सुरमा काम गर्दैन।
म Mojave को साथ एक म्याकमा यो स्थापना गर्न कोशिस गर्दैछु (त्यहाँ पुलिस पृष्ठ १. 1.5.0.० र १..1.5.1.१ मा दुई संस्करणहरू छन्, म १..1.5.1.१ स्थापना गर्न खोज्दै छु)। यो त्रुटि बिना स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ। स्थापनाको अन्त्यमा यसले फायरफक्स ट्याब खोल्दछ "म्याकमा इलेक्ट्रोनिक DNI कसरी प्रयोग गर्ने" मा संकेत सहित निर्देशनहरू सहित।
जे होस्, जब म मोड्युल लोड गर्दछु र लाइब्रेरीमा मार्ग पत्ता लगाउन चरणहरू अनुसरण गर्न जान्छु, त्यहाँ केहि छैन, त्यहाँ कुनै फोल्डर छैन "Libpkcs11-dnie"। त्यसैले म फायरफक्सले मलाई भनेको चरणहरू गर्न सक्दिन।
के यो अरू कसैलाई भएको छ, कसरी यसलाई ठीक गर्न सकिन्छ?
अर्को प्रश्न जुन अनौंठो लाग्न सक्छ, के यो स्थापना प्रक्रियाको क्रममा USB र DNIe सम्म पाठक जडान हुनु आवश्यक छ? यो माथिको केहि गर्न को लागी हुन सक्छ।
मँ यो कागजात प्रस्तुत गर्न फिक्स गर्न एकदम जरुरी छ र पुलिसको प्राविधिक सहयोगले मलाई सहयोग गर्दैन…।
यदि मसँग FNMT प्रमाणपत्र स्थापित छ भने, के मैले पहिले यसलाई मेट्नु पर्छ? वा यो आवश्यक छैन? त्यो भन्दा पहिले मसँग NIE थियो र मसँग प्रक्रियाहरू गर्न FNMT प्रमाणपत्र थियो तर अब मसँग DNIe छ र म यसलाई स्थापना गर्न चाहान्छु…। स्पष्ट प्रविधि मेरो कुरा होईन
नमस्ते। तपाईंले लेखमा सिफारिस गर्नुभएको ट्रस्ट रिडर मैले किनेको छु र मसँग म्याक हाई सिएरा १०.१३ छ। स्पष्ट रूपमा समर्थित छैन। किनभने जब मसँग सबै नक्सा कार्ड डाउनलोड हुन्छ, यसले सत्र सुरु गर्न पाठकलाई पत्ता लगाउँदैन।
MAC को यो संस्करणको लागि तपाइँ कुन पाठकलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ? धन्यवाद
यसले मलाई कार्यक्रम डाउनलोड गर्न दिँदैन, त्यसैले म केही गर्न सक्दिन। यो भाइरस वा समान हो भनेर व्याख्या गर्नुहोस्। मैले सफारी र क्रोमबाट प्रयास गरेको छु। असम्भव।
मैले सबै कुरा स्थापना गर्न व्यवस्थित गरेको छु, मैले प्रमाणित गरेको छु कि यसले पुलिसको निर्देशनहरू पछ्याएर काम गर्छ तर जब म यसलाई कुनै अन्य पृष्ठमा प्रयोग गर्न चाहन्छु यसले मलाई त्रुटि दिन्छ। यसले मलाई सधैं पासवर्ड सोध्छ (कृपया PKCS#11 इलेक्ट्रोनिक DNI टोकनको लागि पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।) जुन मैले पुलिस स्टेशनमा DNIe मा राखेको हो तर यसले काम गर्दैन। कसैलाई थाहा छ समस्या के हो?
एप्पलले ओएस एक्स १०.११. El एल क्यापिटनको तेस्रो बिटा जारी गर्‍यो
Spotify १०० मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता भन्दा बढी छ